ရာသီခွင်အရ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
သင့်ကို ပိုကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းသော အပြောင်းအလဲ (၈)ခု
in Fashion, Lifestyle, Lotaya
နက္ခတ်ဗေဒအရ ရာသီခွင်လက္ခဏာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို စုစည်းပုံ၊ အလှဆင်ပုံအပါအဝင် ကဏ္ဍများစွာကို လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရာသီခွင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ အကြိုက်၊ အပြုအမှုတွေနှင့် ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ရာသီခွင်အရ သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုအလှဆင်ကြမလဲ?
သင့်ရဲ့ရာသီခွင်အရ သင့်အိပ်ခန်းကို အလှဆင်ရတာက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက သင်အဆင်ပြေမယ့် အရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မိဿရာသီဖွားတွေက စိတ်အားထက်သန်ပြီး စွန့်စားလိုသူတွေ ဖြစ်ကြတာကြောင့် ဒါက သင့်အိပ်ခန်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီဖွားတွေက ခေတ်မီတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ရှိရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် traditional decorative ထိတွေ့မှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
သင်က မိဿရာသီဖွားဆိုရင် ထောင့်တိုင်းကို နေရောင်ခြည်ကျရောက်နိုင်တဲ့ ကျယ်ဝန်းသော အိပ်ခန်း ရှိသင့်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပြတင်းပေါက်ကြီးကြီးတွေကို ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။
တေဇောဓါတ်ကြီးစိုးတာကြောင့် သင့်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့်အရောင်တွေက အနီရောင်နဲ့ သဘာဝအရောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအရာတွေကို ပိုပြီး ပေါ်လွင်သွားအောင် ဓါတ်ပုံ ပန်းချီကားတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပါ။
ပြိဿရာသီဖွားတွေက ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ လက်တွေ့ကျခြင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ ဒါက အိပ်ခန်းအပြင်အဆင်အပါအဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာလည်း အများကြီး လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ဒီရာသီခွင်တွေအတွက် အဓိကအရာက သူတို့အိပ်ခန်းဟာ အရမ်းသက်တောင့်သက်သာရှိရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အဖြူကဲ့သို့သော ကြားနေအရောင်တွေက ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရောင်တွေက ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ငြိမ်သက်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ပြိဿရာသီခွင်အများစုက ရိုးရှင်းတဲ့ စတိုင်လ်ကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့အိမ်ကို သူတို့ဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားစတိုင်လို အလှဆင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
မေထုန်ရာသီဖွားတွေက တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေပြီး သူတို့ဘဝမှာ အမြဲတစေ ဟာမိုနီဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့က အသစ်အဆန်းတွေဆိုရင် သတိထားမိသလို ခံစားရတဲ့အပြင် စူးစမ်းလေ့လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် pastel blues နဲ့ အဝါရောင်တွေက ကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိပ်ခန်း (အရွယ်အစားအရ) ကျယ်ဝန်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ သင့်ကို ပျော်ရွင်စေမယ့် မိသားစုဓါတ်ပုံတွေ၊ ပိုစတာတွေ၊ ပန်းချီကားတွေနဲ့ ဒီနေရာကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။ ဆေးသုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်လက်ရာကို ဖော်ထုတ်ဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေရဲ့ အိပ်ခန်းဟာ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အရမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာတွေနဲ့ ခွဲခြားထားမှာပါ။ လွှမ်းမိုးတဲ့ ကာလာမျိုးမရှိသော်လည်း အပြာရောင်ကို သုံးသင့်ကြောင်း အကြံပြုပါတယ်။ အဖြူကဲ့သို့သော ကြားနေအရောင်တွေကလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့် သူတို့နဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ကရကဋ်ဖွားတွေဟာ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ စုစည်းမှုကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ classic နဲ့ modern ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ခေတ်ဟောင်းစတိုင်မျိုးတွေ၊ သင့်စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ မှန်တွေနဲ့ အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ သုံးပါ။
သိဟ်တွေက အရဲရင့်ဆုံး signs တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နေရာတွေကို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး တန်ဖိုးကြီးတာတွေနဲ့ သိမ်းပိုက်ထားတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အိပ်ရာက သိသာထင်ရှားပြီး ကြီးမားနေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သိဟ်ရာသီဖွားအများစုက ပရိဘောဂတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လေ့ရှိပါတယ်။
သိဟ်ရာသီဖွားတွေက ပေါ်လွင်နေတဲ့ အရောင်လေးတွေ၊ strong ဖြစ်တဲ့ အရောင်တွေ ၊ စိုစိုလွင်လွင်ဖြစ်တဲ့ အရောင်တွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သူတို့က ကြော့ရှင်းမှုကိုလည်း နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သိဟ်ရာသီဖွားတွေဟာ အိပ်ရာတွေ၊ ကုလားကာတွေနဲ့ အလှဆင်ခြင်းတွေကတဆင့် ပေါ်လွင်တာမျိုးကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ သင်က Leo တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင့်အိပ်ခန်းထဲမှာ ကြည့်မှန်တွေ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
ကန်ရာသီဖွားတွေက သူတို့ရဲ့အိပ်ခန်းတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ သန့်ရှင်းအောင် ထားရတာကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကို သူ့နေရာနဲ့သူ ဖန်တီးတတ်ပါတယ်။ ဒီရာသီခွင်တွေက အရမ်းရိုးရှင်းတယ်၊ စေ့စပ်သေချာပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရင်းကြောင့် အိပ်ခန်းတွေမှာ ဦးစားပေးသင့်တဲ့ အရာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အာရုံခံစားမှုကို အားဖြည့်ပေးပြီး အလင်းဖြာစေတဲ့ အရောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့က သူတို့အိပ်ခန်းကို အလှဆင်ရာမှာ သဘာဝဆန်တာကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ ကန်ရာသီဖွားတွေက ပန်းပွင့်ပုံစောင်တွေကို နှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့စားပွဲပေါ်မှာ အပင်တစ်ပင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပစ္စည်းလေးတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ စနစ်တကျဖြစ်ဖို့ စင်တွေ၊ စားပွဲတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
တူရာသီဖွားတွေဟာ သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ အလှဆင်မှု နှစ်ခုလုံးမှာ ဟာမိုနီဖြစ်တာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ သူတို့အလှဆင်မှုတိုင်းက လိုက်ဖက်တယ်၊ ချစ်စရာကောင်းပြီး စတိုင်ကျပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့ရဲ့အိပ်ရာနဲ့ ပရိဘောဂတွေက အဖြူရောင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီး တခြားအရာဝတ္တုတွေက အဖြူရောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနည်းဖြင့် သူတို့ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ chromatic balance (အရောင် ဟန်ချက်ညီမှု) ကိုရရှိကြပါတယ်။
ဗြိစ္ဆာရာသီခွင်တွေဟာ အရမ်းတတ်ကြွပါတယ်။ သူတို့က စွန့်စားလိုစိတ်၊ ပြင်းပြစိတ်နှင့် သူတို့ဘဝမှာ အထူးစွမ်းအင်တတ်ကြွမှုတွေရှိတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ ဒီအရာက အိပ်ခန်းမှာ ထင်ဟပ်နေသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရာအားလုံးကို ပေါ်လွင်စေအောင် နံရံတွေကို လိမ္မော်ရောင်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဗြိစ္ဆာရာသီခွင်တွေအနေနဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို မီးဆိုင်းတွေ၊ လိုက်ကာအရှည်တွေနဲ့ အလှဆင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ကုတင်ဘေးစားပွဲတွေ၊ (သို့) စားပွဲတွေကို သုံးပါ။
ဓနုတွေရဲ့ အိပ်ခန်းတွေက အရမ်းကိုနွေးထွေးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့် ဒီရာသီခွင်တွေဟာ လူတိုင်းရဲ့ အမြင်အာရုံမှာ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်စေမယ့် အိပ်ခန်းတွေကို ပိုနှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေရာက ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ ကော်ဇောတွေနဲ့ ပရိဘောဂတွေမှာ အရောင်တွေ၊ ဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ ကစားဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ အခန်းကို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဖြစ်စေဖို့ ရိုးရိုးမှန်တစ်ချပ်ကို ချိတ်ဆွဲထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
ဒီရာသီခွင်တွေက အလှဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ခေတ်စားလာတဲ့ ဖက်ရှင်၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေနောက်လိုက်ဖို့ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ မကရရာသီဖွားတွေက ရိုးရှင်းပြီး လက်တွေ့ကျတာကြောင့် အခန်းထဲမှာ ထင်သာမြင်သာရှိမယ့် ကြားနေအရောင်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေတယ်လို့ထင်တဲ့ အခြားအရောင်တွေနဲ့လည်း ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ industrial style မျိုးအဖြစ် သံနဲ့ သစ်သား အရာဝတ္တုတွေကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်က ကုံရာသီဖွားဖြစ်ရင် တီထွင်ဆန်းသစ်ရတာကို နှစ်သက်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အိပ်ခန်းကို (နေရာအားလုံးလိုပဲ) original ဖြစ်ရပါမယ်။ နံရံတွေကို အလှဆင်ရာမှာ စတိုင်တွေအများကြီး ထည့်လို့ရတာကြောင့် အဖြူနဲ့ မီးခိုးလို luxuryဆန်ဆန်အရောင်တွေ ပေါင်းစပ်ပေးပါ။ ပန်းချီကားတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ကြည့်မှန်လှလှတစ်ချပ်တို့နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပါ။ သင့်အိပ်ခန်းမှာ ပြတင်းပေါက်ကြီးကြီးနဲ့ ဂန္တဝင်ဆန်ဆန် ကြော့ရှင်းတဲ့ လိုက်ကာတွေတပ်ဖို့ သေချာပါစေ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးက ပြီးပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ်။
Pisces က တီထွင်ဖန်တီးမှုကို မော်ဒန်နဲ့ ဣန္ဒြေကြီးမှု ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်ရာသီဖွားဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်နဲ့ ပါစင်နယ်နေရာတစ်ခု ရှိချင်ကြသူတွေပါ။ သူတို့က တောက်ပတဲ့အရောင်တွေနဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ပေါ်လွင်စေမယ့်အရောင်တွေကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ ပရိဘောဂတွေ၊ အရောင်စိုစိုလွင်လွင် ဆိုဖာတွေအကြားမှာ casualနဲ့ elegance ဖြစ်မှုကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပါ။
အမျိုးသမီးအများစုဟာ အနှိပ်စက်ခံနေရသော ဆက်ဆံရေးမှာ ငရဲကျနေသလိုမျိုးခံစားနေရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? သူတို့က ဘာကြောင့် ဒီလိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ဘာလုပ်နေကြသလဲ? သူမ ဘာကြောင့် ထွက်မသွားနိုင်ရတာလဲ? NFL နောက်တန်းကစားသမား Ray Rice ဟာ စေ့စပ်ထားပြီးသား သူ့ချစ်သူကောင်မလေး...
ကိုယ်က ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘဝက ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်ဖို့ သင်ယူရမယ့် သင်ခန်းစာတွေကို ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေက လက်ခံဖို့ အရမ်းခက်ခဲပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်လက်ခံပြီးတာနဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုကို သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။...
အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့က အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ တိကျသော အခြေအနေတွေကနေ စနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ ဒီအချက်အလက်တွေလောက်နဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ၁။ အားနည်းချက်ကို ပြခြင်းနှင့် စိတ်ခံစားမှုကို ဖော်ပြခြင်း အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့...